सोमवार, मंसिर २२, २०७७ वावुकाजी कार्की
७० वर्षको सपना पुरा गर्न गरिएको जनताको आग्रहलाइ किन लत्याइयो ? जीवनभर बोकेको आदर्शको झण्डा आदर्शलाई ब्यबहारमा रूपान्तरण गर्ने बेलामा रद्दीको टोकरीमा किन फालियो? यो आदर्शको झण्डा यो उचाइमा उठाउन कमरेड केपी ओली र कमरेड प्रचण्डको थोरै योगदान छैन । वहाँहरू लगायत थुप्रै नेता कार्यकर्ताको योगदानबाट हासिल भएको थियो । हजारौंको बलिदान भयो । लाखौं बेघरबार भए । हजारौं अपाङ्ग बन्न पर्यो । यी तथ्यहरू बिगतका कुरा थिएनन् वा ईतिहासका कुरा हैन जुन जिवित सत्य तथ्य हो ।
जसले यो परिस्थिति निर्माण गर्न कुर्वानी गर्यो ऊ जीवित छँदै यो सत्य किन ब्यहोर्नुपर्यो ? बिश्व चकित हुने गरी ७२ को सरकार सञ्चालन गरेका केपी ओलीको यो हालत कसरी किन भयो ? १४ वर्ष जेलजीवन केबल सत्ता सुखका लागि मात्र अबश्य थिएन । बिश्व चकित हुने गरी बिश्वका न्यायप्रेमी जनताले अनुकरण गर्न लालायित हुने गरी जनयुद्द सञ्चालन गरेका प्रचण्डको यात्रा किन अबरूद्द हुँदैछ ? कम्युनिष्ट आन्दोलनको टुट र फुटबाट आजित जनतालाइ अस्ति भर्खर आशा भरोसा देखाएका नेताहरूको यो बेमेल किन ?
कम्युनिष्ट आन्दोलनको बिकासमा सिङ्गो जीवन कुर्वानी गरेका सयौं नेताहरू प्रचण्ड वा ओली समुहमा बिभक्त किन ? सिङ्गो बिश्वलाइ बैचारिक योगदान गर्लान् जस्ता देखिएका घनश्याम भुसाल कृषि मन्त्रालयको पाले जस्ता भएका किन ? युवा नेतृत्वको पहिचान बनाएका र अत्यधिक युवाले आशा भरोसा गरेका योगेश भट्टराई यति समुहको मेनेजिङ डाइरेक्टर जस्ता भएका किन? दुइतिहाइ जनमतलाई भरोषा दिनुपर्ने सरकारका सदश्यहरू भ्रष्ट उपभोक्ता समितिका सदश्य जस्तो निरिह किन ? जसको रगतमा टेकेर देशको १ नम्बर नागरिक बिद्या भण्डारी भईन्, उनैले आफु उभिएको रगतमाथि न्याय गर्न सकिनन् किन ? सरकार गठन गरेको छ महिना नपुग्दै अरिङ्गालको खोजी गरेको किन ? मुटु भएका सम्पादक नदेखेको किन ?
सन्सारमा एउटै आन्दोलनबाट भएका परिबर्तनले चकित हुने गरी जनताको जनजीवनमा परिवर्तन आयो । नेपालमा तिन तिनवटा परिवर्तनहरू खेर जाँदैछ किन ? बिगत ४७-६२ मा पन्चायतको नाम लिन लाज मान्ने पञ्चहरू आज गणतन्त्र त्यो पनि दुइतिहाइको सरकारले शासन गरिरहेका बेला पञ्चायत जिन्दाबाद भन्दैछन् किन ? देशलाइ दिन दुईगुणा रात चौगुणा अधोगतितिर धकेल्ने पन्चहरू गणतन्त्रका अभियन्ताहरू, नायकहरूलाइ लल्कारिरहेका छन् किन ?
सुबिधाजनक बहुमतको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार र उक्त सरकार सञ्चालनको अनुमति प्राप्त दलका एक र दुइ नम्बरका ब्यक्तिहरू एकवर्षदेखि तनावमा छन् किन ? आमुल परिवर्तनका एजेण्डाहरूमा आम जनतालाई सहमत गराउने यी योद्दाहरूको आपसि कटु लडाइँ किन ? बिख्यात बिद्वानहरूको अध्ययनको गम्भिर बिषय हो यो ।
गणतन्त्रकालको दुइतिहाइ सरकारको बेला पन्चायतको र्याली ? यो भन्दा ठुलो जोक्स अरू के हुन सक्छ ? यति पेचिलो अवस्थामा पनि सुबिधाजनक बहुमतको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक सरकार र उक्त सरकार सञ्चालनको अनुमति प्राप्त दलका एक र दुइ नम्बरका ब्यक्तिहरू एकवर्षदेखि तनावमा छन् किन ? आमुल परिवर्तनका एजेण्डाहरूमा आम जनतालाई सहमत गराउने यी योद्दाहरूको आपसि कटु लडाइँ किन ? बिख्यात बिद्वानहरूको अध्ययनको गम्भिर बिषय हो यो ।
सतहमा देखिएका पद प्रतिष्ठा, भात भान्साको मात्र किचलो अबश्य होइन यो । यसको अन्तर्यमा अरू नै हुनपर्छ र यति लामो झगडा भइरहेको छ । यसको गम्भिर अध्ययन र चिरफार समाजसास्त्रीहरूले गर्नैपर्छ । वा यसका अरू कारण के के हुन सक्छन् ? आम जनताको समर्थन र सहभागिता पाउनुपर्ने सरकार र दलको नेतृत्व किन घेराबन्दीमा पर्दैछ ? के हाम्रो देशको नियती नै यस्तो हो ? लामो आन्दोलन र संघर्षबाट स्थापित नेतृत्वले रूपान्तरणको काम गर्न नसक्नुको कारण के हो त ? के नचाहेर नै हो त ? यस्तो निस्कर्ष निकाल्न सकिएला ?
यदि त्यसो हो भने हिजोका शासकहरूले पनि चाहेका थिए, तर कसैले गर्न दिएनछन् भन्न पर्ने हो त ? यहाँ सिद्दान्त दर्शनको कुरा पनि छ । हिजो शासन गरिरहेकाहरूको दृष्ट्रिकोण पुरातनपन्थी थियो । जसलाई हामी यथास्थितिबादी दक्षिणपन्थि भन्थ्यौं । आज शासनको उच्चआसनमा बस्नुभएकाहरू माक्र्सबादी बैज्ञानिक समाजबादी बिश्वदृष्ट्रिकोण राख्नुहुन्थ्यो । जसले राष्ट्र र जनताको प्रगतिमा आफ्नो भबिश्य देख्नुहुन्थ्यो । तर किन आज चर्को दक्षिणपन्थि यथास्थितिबादी जस्ता बन्न बिबस भए ? यसको कारण के होला ?
राजनितिक क्रान्ति सकियो अब आर्थिक क्रान्ति आबश्यक छ भनेर आर्थिक क्रान्तिका लागि अभिमत पाएको सरकार र दल के कारणले अकर्मन्य बने ? सामान्य सेवामुलक क्षेत्रहरू बिस्तार र ब्यबस्थित हुँदै गर्दा उत्पादनमुलक क्षेत्र करिव सुन्यको अवस्था किन ? भ्रष्टाचारप्रति सुन्य सहनशिलता लिने उद्घोष गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई भ्रष्टाचारीलाई संरक्षण गरेको आरोप किन लाग्यो ? यही अबधिमा दर्जनौं भ्रष्टाचार काण्डहरू घटे किन ? आफैंले छानबिन आयोग बनाएर वाइडबडी घोटाला काण्डमा छानबिन गर्ने कार्यादेश नदिनुपरेको किन ?
अर्थात सबै सरकारहरूको गति प्रगतिशिल रहेन । सुशासनको दैलो एक बित्ता उघ्रेन । ईतिहासमै बिगतलाई जित्ने गरी भ्रष्टाचार बढ्यो, बेथिति मौलायो, आत्महत्या बड्यो, बालिका बलात्कार र हत्या जस्ता जघण्य अपराधका घटना एकपछि अर्को रफ्तारमा अगाडि बड्यो किन ? बिद्वान बिश्लेषकहरूका लागि यसको चिरफार गर्नु जिम्मेवारी हो ।
यी र यस्ता दर्जनौं मुद्दाहरू उठे, उठाईएका छन् । नेपाल मात्र हैन सिङ्गो बिश्वका न्यायप्रेमी जनतालाई आफ्नो परिवार ठान्ने प्रचण्डलाई परिवार मोहबादको आरोप लागेको किन ? २५ वर्षदेखि आशा गरेको मेलम्चिको पानीमा गडबडी गर्दै उपत्यकाबासीको सपनामा तुषारापात गराउने बिना मगरलाई हटाऊ भन्न नसकेको किन ? मुल नेतृत्वको कुरा यस्तो छ । नेतृत्वका अरू सहयोगि ब्यक्तित्वहरूका पनि यस्ता दर्जनौं मुद्दाहरू यद्यपी रहेका छन्।
माथिदेखि तल सम्म शिरदेखि पुछारसम्म एउटै दृष्ट्रिकोण राख्नेहरूको बहुमत छ, सरकार छ तर उक्त सरकारहरू असफल उपभोक्ता समिति जस्ता बने किन ? छ वटा प्रदेशमा प्रदेश सरकार कम्युनिष्ट पार्टीको छ र एउटा प्रदेशमा गैर कम्युनिष्टको सरकार छ तर कम्युनिष्ट र गैर कम्युनिष्टको सरकारमा अन्तर छैन किन ? स्थानिय तहमा बढी स्थानमा कम्युनिष्टको सरकार छ, केही स्थानमा अरू गैर कम्युनिष्टको सरकार छ तर ती भन्दा भिन्नता कम्युनिष्टको सरकारमा देखिएको छैन किन ?
-कार्की नेकपा दोलखाका नेता हुन् ।
प्रकाशित मिति: सोमवार, मंसिर २२, २०७७, ०९:५६:००